« Fanafihana laroina famonoam-baolina voalohany no ataonay manritra an’io fihaonana io. Rehefa to izany dia manamafy ny fiarovantena amin’izay », hoy i Nirina Andrianoelison na Raniry, mpanazatra ny AS Adema.
Mpilalao 16 monja no hoentin’ity ekipan’ny Bidvest Wits ity eto amintsika, araka ny efa nampanantenain’izy ireo ary ao amin’ny trano fandraisam-bahiny Colbert izy ireo no hipetraka. « Tsy maintsy manonitra ny fandraisana tsara nataon’izy ireo taminay izahay eto », hoy i Yves Marius Randriamialisoa, filohan’ny AS Adema tetsy amin’ny GR Anosivavaka, omaly. Nofenoina ho 18 ny isan’ny mpilalao ho an’ny AS Adema. Saika ireo nankany Afrika Atsimo nandritra ny lalao mandroso avokoa no nalahatry ny mpanazatra Raniry sy Johnny amin’ity.